ဟက်ကာတစ်ဦး ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲ။ – Giant's Web
© 2016. Powered by WordPress. Created by Zox Zin Min	ဟက်ကာတစ်ဦး ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲ။
← Hacking, DDoS နှင့် လူနှစ်ဦးNet ဆိုင်အတွင်း လူသားတစ်ဦး ဖန်တီးခြင်း →
One comment on “ဟက်ကာတစ်ဦး ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲ။”	ယမင်း says:	March 3, 2011 at 11:33 am	ဟတ်ကာတော့ မလုပ်ချင်ဘူး။ ဟတ်ကာကို ရှင်းနိုင်တဲ့သူပဲ လုပ်ချင်တယ်။